Ukwamukelwa requierements emayunivesithi Ukrainian. Isifundo e-Ukraine
I semtsetfweni Passport akufanele kube ngaphansi kuka for 1 Ngonyaka Sikhungo Imibhalo (O level / SSCE / HSSC, Bachelor noma Master Degree uma ikhona). Ifomu lokufaka isicelo ligcwaliswe ngosonhlamvukazi (Chofoza lapha ukulanda Application Form ), kodwa ngisho nangaphezulu kulula isicelo online (ifomu lesicelo ayidingekile kuleli cala)
I E-mail nge okuskeniwe kwemibhalo okukhulunywe ngazo ngenhla kumele aqukethe ulwazi olulandelayo ngokulandelana
Igama, Igama kanye neSibongo ubuzwe
Usuku & Indawo yokuzalwa
Ukuba semthethweni Passport (usuku elakhishwa ngalo & kokuphela kwesikhathi)
ikheli lesikhashana / ikheli yamanje (uma sihluke ikheli unomphela)
Amayunivesithi Ukrainian uqale ukuba ikhiphe "Isimemo Letter" kusukela ngo-March / April unyaka ngamunye.
Samukela Izicelo Study in Universities Ukrainian wonke unyaka. We kulondeke "Isimemo Letters" abafundi bafake izicelo ngathi ekuqaleni futhi ikhiphe "Isimemo Letters" yabo kusukela akhethwa / Universities Kunconywa ngokulandelana. I Amayunivesithi Ngilokhu likhipha "Isimemo Letters" izincwadi ezivela March / April kuya November (ikakhulu enwetshiwe uDisemba). Ngemva March / April, kuthatha 3 izinsuku ezingu-ikhiphe i "Isimemo Yokutadisha" incwadi evela esikhethiweyo / Kunconywa University.
* Fast service courier "TNT", "DHL", "FedEx" noma EMS ukuletha "Isimemo Yokutadisha" Incwadi ngaphakathi 4 ukuze 5 izinsuku zokusebenza. Izindleko service ehambisa 100 $ US.
Lezinhlobo ukuqala kusukela 1st September. Ukuba nabafundi bakwamanye amazwe avunyelwe ukuba ujoyine English zabo TiNhlelo okulingene kuze 15th of November. Students ifika emva 15 November angajoyina Preparatory Programme kuphela. Chofoza lapha ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana Preparatory Uhlelo.
* Zonke izinkokhelo bakhokhelwa efika Ukraine ngaphandle izindleko "Isimemo Letter" 300 $ US & izindleko ehambisa "TNT", "DHL", FedEx noma EMS 100 $ US i.e. ingqikithi 400 $ US . Lesi samba ikhokhwa kithi ngokusebenzisa Western Union noma Imali Gram noma Bank Dlulisa. Ngoba Master / PhD Level “incwadi Isimemo” kubiza 400 $ US kanye neposi amacala brining ingqikithi 500 $ US okumele ikhokhwe sikubeke.
Abafundi kufanele ngaso sonke isikhathi ukunikeza ikheli elivumelekile leposi & Izinombolo on ifomu lesicelo.
Lapho ethola incwadi Isimemo
Umfundi kufanele uthintane Ukraine embassy e yakhe / izwe lakhe ukuze afake isicelo visa umfundi. Ukraine embassy uqala ngokwamukela Student Visa Izicelo kanye udaba Student Visa kusukela May / June bese ugcine abanikeze kuze 15th November. Kwamanye amazwe Ukraine embassy iqala ukusebenza nge Student Visa Izicelo kanye udaba Student Visa ngo-August 15 kuze 15th November (ngokuvamile ibizwa enwetshiwe uDisemba / January). madokhumende alandelayo kufanele zithunyelwe ku Ukraine Embassy ukuthola Visa Student,
Amaphepha adingekayo on Ukufika:
Kunconywe Airports International e-Ukraine : Kyïv (Boryspol sezindiza), Dnepropetrovsk, Odessa futhi Kharkiv.
Umfundi kufanele siqiniseke lokubakhipha zonke Izinkokhelo kanye Imibhalo ngezansi ngenye Ukraine Immigration Authority kungaba bayenqaba naye / Ukungena wakhe futhi xosha emuva / bakhe ezweni lakhe Umfundi kufanele ulethe Imali Yesikole umnyuziki, Imali indawo yokuhlala kanye nezinye izindleko (Ukheshe noma Izikhangibavakashi Amasheke) okukhulunywe ngaye Izifundo & Izindleko akhethwa Uhlelo / nyuvesi. The student is questioned by airport Immigration Authorities about Tuition fee and other charges. The student must bring some extra money for personal keep up. Sicela uvakashele Living Cost ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa.
Internationall Passport / Okuhambayo dokhumenti Ukraine Visa kuso (evumelekile -hhayi engaphansi konyaka)
Original Isimemo Letter of the University
isitifiketi sokuzalwa , Olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-ummeli olungisa izivumelwano Public noma Ukraine Embassy. (Umfundi kuncike wokuba alethe amaphepha kwisi Ukraine uma Ukraine Embassy edingekayo izinguqulo ngesikhathi lokukhipha Visa)
Izitifiketi School Original ( O level / SSCE / HSSC, Bachelor noma Master Degree uma ikhona ) olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-ummeli olungisa izivumelwano Public noma Ukrainian Embassy (Umfundi kuncike wokuba alethe amaphepha kwisi Ukraine uma Ukraine Embassy edingekayo izinguqulo ngesikhathi lokukhipha Visa)
General Health- Certificate Medical esikhishwe okungenani izinyanga ezimbili ngaphambi emnyango ku Ukraine olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-ummeli olungisa izivumelwano Public noma Embassy Ukrainian. (Umfundi kuncike wokuba alethe amaphepha kwisi Ukraine uma Ukraine Embassy edingekayo izinguqulo ngesikhathi lokukhipha Visa)
HIV- AIDS Certificate Negative esikhishwe okungenani izinyanga ezimbili ngaphambi emnyango olimini Ukraine futhi ibhaliswe ngokomthetho ngo-ummeli olungisa izivumelwano Embassy Public noma Ukrainian. (Umfundi kuncike wokuba alethe amaphepha kwisi Ukraine uma Ukraine Embassy edingekayo izinguqulo ngesikhathi lokukhipha Visa)
Health Insurance esehlanganise unyaka owodwa / for Kwamanye amazwe kuphela SabaBonisi period
Ukuxhaswa Incwadi evela Abazali / ngoMuntu uya athwale izindleko umfundi ngesikhathi uhlala khona / ukutadisha e-Ukraine . (Akusiyo isimo lazo zonke izizwe)
Isitatimende Bank ukuze afakazele ikhono zezimali. (Akusiyo isimo lazo zonke izizwe)
12 usayizi Passport izithombe (3 * 4 cm )
Air ithikithi unyaka owodwa, kumele kube phambili nasemuva
Ukufuduka ikhadi kumele ligcwaliswe by umfundi ekufikeni ku Ukraine futhi ayelokhu basindiswe ngesikhathi uhlala khona e-Ukraine.
Umfundi kufanele baveze it Immigration Iziphathimandla uma ebuya ekhaya noma kokuhamba aphume ezweni.